अत्यधिक जनघनत्व भएको क्षेत्र तराई नजिकै रहेको छ ‘तीनथुम्की डाँडा’ । “म उभिएको पहाड” कथा संस्मरण कथा संग्रह समाप्त - Samadarshi Sanchar
अत्यधिक जनघनत्व भएको क्षेत्र तराई नजिकै रहेको छ ‘तीनथुम्की डाँडा’ । “म उभिएको पहाड” कथा संस्मरण कथा संग्रह समाप्त
समदर्शी संचार, शुक्रबार, १८ भदौ, २०७८, साँझको ०६:०३ बजे
त्यतिबेला चिसोपानी पञ्चमी बजारमा रहेको जनज्योति बोर्डिङ्ग स्कूलको शिक्षक ललीतकुमार लावतीले तीनथुम्की डाँडाको रङ्गीन छेपाराका बारेमा रेडियो नेपालको एउटा कार्यक्रममा जानकारीमूलक लेख पठाउनुभएको थियो । रेडियो नेपालबाट प्रसारण भएको त्यो लेख समय सान्दर्भिक थियो ।
एक तीनथुम्की जाँदा गाडा खैरो रङको छेपारो देखेको थिएँ । ढुङ्गामा हलचल नगरी टाँसिएर बसिरहेको त्यो सानो छेपारोले श्वास फेरेको पनि देखिन्थ्यो । त्यो भन्दा पहिले कहिले पनि त्यस्तो सानो प्रजातिको छेपारो कतै पनि देखेको थिइनँ । आजसम्म पनि देखेको छैन । दुर्लभ प्रजातिको छेपारो भएकोले होला । तीनथुम्कीमा विगतमा पाइने छेपारा झन्डै २ इन्च लम्बाइ र ३ से.मि. जति मात्र गोलाई भएको थिए । खुट्टाहरु फट्याङ्ग्राको जस्तो देखिन्थ्यो । चिल्लो नरम छाला र चम्किलो आँखाहरु थिए ।
त्यसपछि ७÷८ बर्षको अनतरालमा अचानक त्यहाँ पुगेर त्यो चेपमा हेर्दा त्यहाँ छेपारो देखिएनन् । चेप सुनसान थियो. । अरु ५÷६ वर्ष पछि त्यहाँ पुग्दा ती भिन्न प्रजातिका छेपारो बस्ने ढुङ्गाको चेप नै थिएन । कुन बद्मासले भत्काइ दिएछ । नरमाइलो लाग्यो । अघिल्लो पटक चेपमा छेपारो हेर्न नपाउँदा त्यति धेरै नरमाइलो लागेको थिएन । छेपारो बस्ने चेपको कुनै निशानी नै रहेन अब त । दुःखका साथ स्वीकार्न परेको छ– पर्यटकहरुका लागि एउटा आर्कषणको केन्द्रविन्दु सदाका लागि समाप्त भयो ।
अत्यधिक जनघनत्व भएको क्षेत्र तराई नजिकै रहेको छ ‘तीनथुम्की डाँडा’ । जुन फाल्गुनन्द मार्ग हुँदै पहाड चढ्दा सबै भन्दा पहिले भेटिने सुन्दर र रमणीय पहाडी बजार चिसोपानी पञ्चमीको नजिकै अवस्थित छ । तराईमा अत्यधिक गर्मी मौसम हुँदा पनि चिसोपानी पञ्चमी, रवि, रक्से र माङमालुङ जस्ता ठाउँहरुमा भने सिरक ओढेरै सुत्नुपर्दछ । त्यसैले तराईका बासिन्दाहरुका निम्ति गर्मी छल्ने महत्वपूर्ण विकल्प हुन सक्नेछन् यी ठाउँहरु । त्यसरी आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुले प्राकृतिक दृश्यावलोकन गर्नका लागि तीनथुम्की, माङमालुङ, ढयाङगुरे, मिकलाजुङ, हस्टे चियाबारी, सेनचेलेङ चियाबारी, जरीबुटे डााडा, याङ्रुङ् झरना लगायतका रमणीय स्थानहरु रहेका छन् ।